Ny governoran'i Anguilla dia mizara fanavaozana COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Anguilla Travel News » Ny governoran'i Anguilla dia mizara fanavaozana COVID-19
Silver Airways niverina tany amin'ny lanitra tany Anguilla
Ny toerana alehan'ny Anguilla dia nanambara fanakatonana 14 andro noho ny coronavirus COVID-19.
Ny aretin'ny COVID mavitrika dia nanosika ny governoran'i Anguilla hametraka didim-pitsarana hipetraka ao an-trano.
Mahomby eo noho eo, ny mpiasa tsy ilaina rehetra dia tokony hijanona eo amin'ny toerany an-trano ary hikatona ho an'ny mpandeha ny seranana.
Ny trano fisakafoanana sy ny sakafo napetraka dia voafetra ho an'ny serivisy fandraisana an-tanana fotsiny.
Ny governemanta Anguilla androany dia nanamafy fa nisy tranga aretina COVID-19 mahery tsy nisy rohy mivantana tamin'ny aretina nafarana. Olona roa fanampiny fanampiny no voasedra tsara ary mitokana daholo.
Ny mpiara-miasa amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fahasalamana dia nanomboka ny fanarahan-dia mahery vaika mba hahalalana ny olona tsirairay izay mety nifandray akaiky tamin'ireto olona telo ireto. Ny olona rehetra fantatra araka izany dia napetraka ambanin'ny karantina sy notsapaina. Hatramin'ny 20 aprily dia nahitana tranga 30 voamarina COVID-19 i Anguilla ary tranga iray nohafarana mavitrika teto amin'ny nosy.
Manoloana io fivoarana io, manomboka amin'ny 11:59 alina amin'ny 22 aprily 2021, ny olona rehetra ao Anguilla ankoatr'ireo izay manome tolotra tena ilaina dia takiana amin'ny trano an-trano. Ary hikatona koa ny toeram-piasana tsy ilaina rehetra, ary voarara ny fivorian'ny besinimaro.